TASKMGR.EXE - လုပ်ငန်းစဉ်၏ကြောင်း - ဖိုင် FORMAT - 2019
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအတွက်စောငျ့ရှောကျနိုငျသောများစွာသောဖြစ်စဉ်များအနက် "Task Manager ကို" Windows ကိုအမြဲတမ်းပစ္စုပ္ပန် TASKMGR.EXE ။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပျက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။
ထိုခဏခြင်းတွင်ကဖြစ်စဉ်ကို TASKMGR.EXE ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်အတွက်စောငျ့ရှောကျနိုငျသောမှတ်သားရပါမည် "Task Manager ကို" ("Task Manager ကို") သူသည်ဤ tool ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစနစ်များ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်သည်။ ထို့ကြောင့် taskmgr.exe အမြဲသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ run မရပေမယ့်တကယ်တော့အဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့ run အဖြစ်ကြောင့် "Task Manager ကို"လုပ်ငန်းစဉ်များစနစ်အတွက်အပြေးနေကြသည်ဘယ်အရာကိုမြင်စေရန်, taskmgr.exe ချက်ချင်း activated ။
အခုတော့ရဲ့လေ့လာခဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ အဆိုပါအဘို့ဒီတော့ TASKMGR.EXE တာဝန်ရှိ "Task Manager ကို" Windows တွင်တစ်ခုနှင့် executable file ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ tool ကသင် system ပေါ်တွင်အပြေးဖြစ်စဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုသူတို့စားသုံးမှု (CPU ကိုဝန်နဲ့မှတ်ဉာဏ်) စောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုနှင့်, လိုအပ်ပါက, သူတို့နှင့်အတူအခြားအခြေခံလုပ်ငန်းများဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေဖို့သူတို့ကိုအတင်းဖို့ (ဦးစားပေး setting ကို, etc) ။ ထို့အပြင် function ကို "Task Manager ကို" ကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများကိုလည်းပါဝင်သည်, နဲ့ Windows ဗားရှင်း Vista ကနဲ့စတင်ပြီးလည်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပြေး၏စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကိုလုပ်ဆောင်တယ်။
အခုတော့ရဲ့ taskmgr.exe start ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြကုန်အံ့, ဆိုလိုသည်မှာအကြောင်းမရှိ "Task Manager ကို"။ အဲဒီမှာလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူကြိုက်အများဆုံးသူတို့ထဲကသုံးနေသောခေါင်းစဉ်:
context menu ကို "Taskbar";
ပြတင်းပေါက် "Run ကို".
ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ options တွေကိုအသီးအသီးကိုစဉ်းစားကြပါစို့။
သက်ဝင်စေဖို့ "Task Manager ကို" ဖြတ်. "Taskbar"ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုအတူ panel ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ (PKM) ။ ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Start ကို Task Manager ကို".
အတူတူ TASKMGR.EXE ဖြစ်စဉ်ကိုအတူဒီ tool က, စတင်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။
ဒီ utility ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေါင်းစပ်ထားဆိုလိုမြွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်သော့အသုံးပြုခြင်း ကို Ctrl + Shift + Esc။ မှတက်နဲ့ Windows XP ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်အပါအဝင် Ctrl + Alt + Del.
သက်ဝင်စေဖို့ "Task Manager ကို" ပြတင်းပေါက်ကတဆင့် "Run ကို"ဒီ tool များ၏ခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစားများအတွက် ဦးဝင်း + R ကို။ လယ်ပြင်၌ရှိသောဝင်:
ရိုက်သံ ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် "အိုကေ".
ယင်း utility ကို run လိုက်ပါ။
windose7ရှိ "Task Manager ကို" ကိုဖွင့်
windose 8 ရက်နေ့ကို "Task Manager ကို" ကိုဖွင့်
executable file ကိုနေရာယူခြင်း
အခုဟာ executable ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခဲ့ခံနေရဘယ်မှာရဲ့ထွက်ရှာကြကုန်အံ့။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ကို run "Task Manager ကို" အထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့ကြရသောနည်းစနစ်များမဆို။ ယင်း utility ကို shell ကို tab ကိုမှသွားလာရန် "လုပ်ငန်းစဉ်"။ ပစ္စည်းရှာတွေ့ "TASKMGR.EXE"။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ PKM။ ပေါ်လာသော list ကနေ, select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်းဖိုင်တည်နေရာ".
စတင် "ဒီကို Windows Explorer ကို" တိကျစွာစက်ရုံ TASKMGR.EXE တည်ရှိရာဧရိယာထဲမှာ။ လိပ်စာဘားထဲမှာ "Explorer ကို" သင်က directory ၏လိပ်စာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်:
အခုဖြစ်စဉ်ကို TASKMGR.EXE ဖြည့်စွက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ ဒီတာဝန်ဖျော်ဖြေဖို့အရိုးရှင်းဆုံး option ကို - ကဖွင့်နီးကပ်င် "Task Manager ကို"ပြတင်းပေါက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ဦးစံအနီးကပ် icon ပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။
ဒါပေမဲ့အပြင်က, ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အထူးဒီရည်ရွယ်ချက် tools တွေကိုအဘို့ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု. အခြားမည်သည့်ဖြစ်စဉ်ကိုကဲ့သို့, taskmgr.exe ဖြည့်စွက်ဖို့ဖြစ်နိုင် "Task Manager ကို".
အဆိုပါ "Task Manager ကို" အဆိုပါ tab ကိုသွားပါ "လုပ်ငန်းစဉ်"။ နာမတော်ကို scroll "TASKMGR.EXE"။ စာနယ်ဇင်းများ ဖျက်ပစ်ပါ သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "End Process ကို" အောက်ခြေ shell ကို utilities ။
သင်တို့သည်လည်းကလစ်နှိပ်နိုင်ပါသည် PKM ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏နာမတော်အောက်တွင်နှင့်ဆက်စပ် Menu ထဲမှာကို select "End Process ကို".
လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အင်အားသုံးမှုကြောင့်မည်သည့်မသိမ်းရသေးသောဒေတာပြည့်စုံကြောင်းကိုသင်သတိ run dialog box ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်, အချို့ကအခြားပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အထူးသညျဤအမှု၌ကွောကျရှံ့ခွငျးဘာမှမရှိဘူးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် window တွင်နှိပ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ "End Process ကို".
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပြီးစီးလျက်, shell ကိုလိမ့်မည် "Task Manager ကို"ထို့ကြောင့်အတင်းအကြပ်ပိတ်လိုက်တယ်။
အတော်လေးရှားပါးပေမယ့်အချို့ virus များ TASKMGR.EXE ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ််၏နေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရှာခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းဖို့အချိန်မှာသူတို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးဆုံးဌာန၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတှကျအအကြောင်းမရှိကဘာလဲ?
အဲဒါကို run ဖို့ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ပိုပြီးကိုင်တွယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကကသေးပုံမှန်အမှုမရင့်ပေမယ့်သီအိုရီအမျိုးစုံဖြစ်စဉ်များတစ်ပြိုင်နက် TASKMGR.EXE ကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ အမှန်မှာရိုးရှင်းတဲ့ Re-activation နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ် "Task Manager ကို" အသစ်ကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမစတင်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ယခင်တဦးတည်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်လျှင် "Task Manager ကို" ထို့နောက်သူကသတိပေးရပါမည်ဖြစ်ပါတယ်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော TASKMGR.EXE ဒြပ်စင်ကိုပြ။
ဖိုင်တည်နေရာ directory ကိုနိုင်အောင်သီးသန့်ဖြစ်ရပါမည်:
ဖိုင်ကိုဖိုင်တွဲအပါအဝင်အခြားမည်သည့်ဖိုင်တွဲထဲမှာတည်ရှိပါတယ်လျှင် "Windows ကို"ထို့နောက်အများဆုံးဖွယ်ရှိသင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူတိကျစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သော Dr.Web CureIt အဖြစ်သူ၏ site ကို, စကင်ကို antivirus ကို utility ကိုစနစ်, တစ်ဦးအနေအထားမှာတည်ရှိပါတယ်မဟုတ်ကြောင်း TASKMGR.EXE ဖိုင်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။ တစ်ဦးကို PC ဒါမှမဟုတ် bootable flash drive ကိုသုံးပြီးနှင့်အတူကူးစက်ခံနေရ၏တရားခံမှချိတ်ဆက်အခြားကွန်ပျူတာသုံးပြီးပယ်ပိုကောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း Perform ။ ဗိုင်းရပ်စ်လှုပ်ရှားမှု၏ utility ကိုသောဖြစ်ရပ်အတွက်၎င်း၏အကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။
အဆိုပါ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲနေဆဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ detect မတတျနိုငျသည်ဆိုပါက, သင်ဆဲနေရာမှမဖြစ်သည့် taskmgr.exe, ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမဟုတျကွောငျးယူဆရင်တောင်မဆိုအမှု၌, ဒီအခြားဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ မှတဆင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ် "Task Manager ကို" ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ပြီးသောထုံးစံ၌စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ သုံးပြီးသွားလာရန် "Explorer ကို" ဖိုင်ကို directory ၏တည်နေရာကိုပါ။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ PKM နှင့်ကို select "ကိုဖျက်"။ သင်တို့သည်လည်းရှေးခယျြပွီးနောကျ key ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ် ဖျက်ပစ်ပါ။ လိုအပ်သောလျှင်, dialog box ကိုအတွက်ကိုပယ်ဖျက်အတည်ပြုပါ။
အဆိုပါသံသယဖြစ်ဖွယ် file ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်လုပ်ဆောင် registry ကိုနဲ့ anti-virus ကို utility ကို၏ပြန်လည်စစ်ဆေးစနစ်သန့်ရှင်းရေး။
ကျနော်တို့ TASKMGR.EXE ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးအသုံးဝင်သော system ကို utility ကိုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းထွက်နေသေးတယ် "Task Manager ကို"။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်သည်သူ၏အမြင်အောက်တွင်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: (နိုဝင်ဘာလ 2019).